ESI SỤGHARỊA AKWỤKWỌ. DỊKA ỌMỤMAATỤ, SITE NA BEKEE NA RUSSIAN - OFFICE - 2019
Ọrụ kachasị mkpa bụ nsụgharị ederede site n'otu asụsụ gaa na nke ọzọ. Ọ na-ejikarị ọrụ yiri nke ahụ pụta mgbe m na-amụ ihe mgbe ọ dị mkpa ịsụgharị asụsụ Bekee gaa na Russian.
Ọ bụrụ na ị maghị asụsụ ahụ, ị ​​nweghị ike ime n'enweghị nsụgharị nsụgharị pụrụ iche, akwụkwọ ọkọwa okwu, ọrụ ntanetị!
N'isiokwu a, m ga-achọ ịbanye na ụdị ọrụ na mmemme ndị a n'ụzọ zuru ezu.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịsụgharị ederede nke akwụkwọ akwụkwọ (akwụkwọ, akwụkwọ, wdg), ị ga-ebu ụzọ nyochaa ma mata ya. Mgbe ahụ, ederede dị njikere iji ụgbọala gaa na mmemme-nsụgharị. Otu isiokwu banyere ịgụ isiokwu na mmata.
1. Igbo - kwado asụsụ 40 maka nsụgharị
2. Yandex. Translation
3. Ntugharia Google
Ma eleghị anya, otu n'ime nsụgharị nsụgharị a ma ama bụ PROMT. Ha nwere ụdị nsụgharị ọ bụla: maka iji ụlọ, ụlọ ọrụ, akwụkwọ ọkọwa okwu, ndị nsụgharị, wdg. - ma akwụ ụgwọ ahụ. Ka anyi gbalịa ichota ya nnwere onwe di iche ...
Download ebe a: http://www.dicter.ru/download
Ntughari ngwa ngwa maka ịsụgharị ederede. Gigabytes nke ọdụ data agaghị ebudata na arụnyere na kọmputa gị maka nsụgharị, ọtụtụ n'ime ha ị gaghị achọ.
Iji usoro a dị nnọọ mfe - họrọ ederede achọrọ, pịa bọtịnụ "DICTER" na tray na nsụgharị dị njikere.
N'ezie, nsụgharị ahụ ezughị oke, mana mgbe a gbanwere ederede (ọ bụrụ na ederede edeghị ya na mgbagwoju anya ma ọ bụghị ihe gbasara akwụkwọ sayensị na nkà na ụzụ) - ọ dị mma maka ọtụtụ mkpa.
Ọrụ bara ezigbo uru, ọ bụ ọmịiko nke pụtara na nso nso a. Iji sụgharịa ederede, pịa ya na windo mbụ aka ekpe, mgbe ahụ, ọrụ ahụ ga-asụgharị ya na-akpaghị aka ma gosi ya na windo nke abụọ na nri.
Ọdịdị nke nsụgharị bụ, n'ezie, ọ bụghị nke zuru okè, ma dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ederede edeghị na okwu mgbagwoju anya ma ọ bụghị site na ụdị nke akwụkwọ sayensị na nkà na ụzụ, nsonaazụ, echere m, ga-abara gị uru.
N'ọnọdụ ọ bụla, esitebeghị m otu usoro ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, mgbe m sụgharịrị nke a agaghị m edezi ederede ahụ. O nwere ike ịbụ na ọ dịghị otú ahụ!
Ihe kachasị mkpa nke ịrụ ọrụ ahụ dị ka Yandex-nsụgharị. Ntughari, site n'uzo, ntakiri iche. Ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-enwekwu qualitative, ụfọdụ, n'ụzọ megidere, njọ.
Enwere m ike ịsụgharị ederede na Yandex-nsụgharị mbụ, wee nwaa ya na sụgharịrị Google. Ebee ka edere ederede nwere ike ịchọta, họta nhọrọ ahụ.
Onwe m, ọrụ ndị a zuru ezu maka m ịsụgharị okwu na ederede na-amaghị. Tupu mgbe ahụ, m na-eji PROMT, mana ugbu a mkpa maka ya apụla. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụrụ na ị jikọọ ma jiri amamihe setịpụ ntọala maka isiokwu ahụ dị mkpa, mgbe ahụ, PROMT nwere ike ịrụ ọrụ ebube na nsụgharị, ederede dịka ma ọ bụrụ na onye nsụgharị sụgharịrị ya!
Site n'ụzọ, mmemme na ọrụ ndị ị na-eji iji sụgharịa akwụkwọ sitere na Bekee na Russian?
https://termotools.com ig.termotools.com © Office 2019